यी ५ राशिका युवतीहरु, जो प्रेममा कहिल्यै धोका दिँदैनन् ! - Everest Dainik - News from Nepal
यी ५ राशिका युवतीहरु, जो प्रेममा कहिल्यै धोका दिँदैनन् !
काठमाडौंः ज्योतिषशास्त्रको अनुसार केहि यस्ता विशेष राशिहरु छन् जुनले प्रेममा धोका दिँदैनन्। यदि युवतीहरुको कुरा गर्ने हो भने खासगरी यी ५ राशिका युवतीहरु आफ्नो पार्टनरलाई धेरै माया गर्ने र कहिले पनि धोका नदिने खालका हुन्छन् । ज्योतिषको अनुसार आउनुहोस् जान्नूहोस् यी ५ राशिका युवतीहरु जसले आफ्नो पार्टनरलाई कहिले पनि कदापी धोका दिँदैनन् ।
याे पनि पढ्नुस प्रेममा असफल भएपछि बैंकका कर्मचारी गरे आत्महत्या, के छ सुसाइड नोटमा ?
वृष राशिः वृष राशिका मानिसहरु धेरै नै शान्त स्वाभावका नै हुन्छन् । जुन युवतीको राशि वृष हुन्छ उनी प्रेमको सम्बन्धमा कहिले पनि धोका नदिने खालकी नै हुन्छिन् भन्ने मान्यता छ। यस राशिकी युवतीले आफ्नो पार्टनरलाई धेरै नै मायालु व्यवहार गर्छिन् ।
कर्कट राशिः यस राशिका युवतीहरु निकै नै भावुक खालका हुन्छन् । त्यसैले यिनीहरु आफ्नो पार्टनरलाई धोका दिँदैनन् र आफ्नो पार्टनरलाई अरुले भन्दा धेरै नै माया गर्छन् ।
कन्या राशिः कन्या राशि भएकाहरुलाई धेरै नै समझदार मान्ने गरिन्छ । यी राशि भएकी युवतीले पनि प्रेममा कहिले पनि धोका दिँदैनन् ।
वृश्चिक राशिः यस राशिका मानिसहरु धेरै नै भावुक नै मानिन्छन् । यस राशिकी युवतीहरुले आफ्नो पार्टनरलाई एकदम साँचो माया गर्ने खालका मानिन्छन् र यिनीहरुले सम्बन्धको महत्वसमेत राम्ररी बुझेका छन् भन्ने मान्यता रहेको छ ।
मकर राशिः मकर राशिका युवतीहरु पनि धेरै भावुक खालका नै हुन्छन् । यिनीहरु जब कुनै केटासँग प्रेम गर्छन् तब पूरा सच्चाइका साथ गर्छन् र कहिले पनि अलग हुन नचाहने हुन्छन ।
ट्याग्स: प्रेम, युवतीहरु